Kedu ihe bụ PET: njirimara, ojiji na imegharị ihe | Mmeghari ohuru Green
N'ime ụwa plastik enwere ụdị ihe sịntetị dị iche iche. Otu n'ime ha bụ PET (Poly Ethylene Terephthalate). Ọ bụ nke otu polyesters na ọ bụ ụdị ihe akụrụngwa rọba ewepụtara na mmanụ ala. Ọtụtụ ndị amaghị kedu ihe bụ PET. Ndị ọkà mmụta sayensị Britain Whinfield na Dickson chọpụtara ya, na 1941, bụ ndị debere ya dị ka polymer maka imepụta eriri. Ọ bara ezigbo uru taa.
Ya mere, anyị ga -arara akụkọ a ka ị gwa gị ihe PET bụ, njirimara ya na ihe ọ bụ.
1 Kedu ihe bụ PET
2 Ọghọm na uru
3 Ihe ndị a na -eji PET
4 Igbe PET na -adịgide adịgide
4.1 Obere ike na akụrụngwa maka imepụta ya
4.2 Ntughari ka mma
Ihe a nwere njirimara ndị a, nke mere ka ọ bụrụ ihe bara uru ma dị mma maka owuwu:
Enwere ike ịhazi ya site na ịfụ, injection, extrusion. Kwesịrị ekwesị maka imepụta ite, karama, ihe nkiri, foils, efere na akụkụ.
Nghọta na gloss na mmetụta dị ukwuu.
Ihe mgbochi gas.
A na -amata ya site na gamma na ethylene oxide.
Ọnụ / arụmọrụ.
Edebere # 1 na imegharị ihe.
Ọghọm na uru
Dịka ihe niile, enwekwara ọghọm karịa PET. Ihicha bụ otu n'ime ọghọm ya. A ga -akpacharịrị polyester niile ka ọ ghara ịlafu ihe onwunwe. Iru mmiri nke polymer mgbe ị na -abanye usoro a ga -abụrịrị karịa 0.005%. Ụgwọ akụrụngwa bụkwa ọghọm, dịkwa ka ọnọdụ okpomọkụ dị. Biologically gbakwasara ntụtụ ịfụ ịkpụzi akụrụngwa na -anọchite anya ezigbo nkwụghachi azụ dabere na imepụta oke. Na ịkpụzi na ịpụ apụ, enwere ike iji akụrụngwa PVC eme ihe, nke nwere ọtụtụ mgbanwe iji mepụta nha na ụdị dị iche iche.
Mgbe okpomọkụ gafere ogo 70, polyester enweghị ike ijigide ezigbo arụmọrụ. Emere ndozi site na imezigharị akụrụngwa iji nye ohere ijupụta ọkụ. Crystalline (opaque) PET nwere ezigbo nguzogide okpomọkụ, ruo 230 Celsius. Akwadoghị maka iji mpụga na -adịgide adịgide.
Ugbu a, anyị na -aga n'ihu nyochaa ihe uru ya bụ: anyị nwere akụrụngwa pụrụ iche, nnweta dị mma na imegharị ihe. N'ime ezigbo akụrụngwa anyị nwere idoanya, gloss, nghọta, ihe mgbochi na gas ma ọ bụ aromas, ike mmetụta, thermoformability, dị mfe iji ink ebipụta, na -enye ohere isi nri microwave.
Ọnụahịa PET agbanweela ihe na-erughị polymer ndị ọzọ dị ka PVC-PP-LDPE-GPPS n'ime afọ ise gara aga. Taa, a na -emepụta PET na North na South America, Europe, Asia, na South Africa. Enwere ike imegharị PET iji mepụta ihe akpọrọ RPET. Ọ bụ ihe nwute, n'ihi oke okpomọkụ dị na usoro a, enweghị ike iji RPET mepụta nkwakọ ngwaahịa na ụlọ ọrụ nri.
Ihe ndị a na -eji PET
Enwere ihe dị iche iche sitere na polyethylene terephthalate ma ọ bụ PET. Ihe ndị a bụ ụfọdụ ihe na ihe ejiri arụ ọrụ thermoplastic a na -emegharị emegharị:
Epeepe plastik na karama a na -edozigharị. A na -eji Thermoplastics eme ihe na imepụta arịa ma ọ bụ ihe ọveraụ beụ, dị ka ihe ọ softụ softụ dị nro na karama mmiri. N'ihi ịdị ike ya na ike ya, ọ bụrụla ihe eji eme ihe kwa ụbọchị na mpaghara ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Agbanyeghị na ọ na -emetụtakwa eziokwu na enwere ike imegharị ya kpamkpam, eziokwu ahụ na ọ na -enyere aka ime ọtụtụ karama plastik na arịa ndị ọzọ na -atụ ya.
Ụdị textiles dị iche iche. PET Ọ bụ ụdị plastik eji arụ ọrụ akwa na -eme akwa dị iche iche. N'ezie, ọ bụ ezigbo ihe dochie anya akwa linin ma ọ bụ ọbụna owu.
Ihe nkiri ma ọ bụ ihe nkiri foto. A na -ejikwa polymer plastik a eme ihe nkiri foto dị iche iche. Agbanyeghị, ọ bara ezigbo uru maka imepụta akwụkwọ mbipụta X-ray bụ isi.
Igwe mere. Taa, a na -eji polyethylene terephthalate arụpụta igwe ire ere dị iche iche na igwe arcade.
Ọrụ ọkụ. A na -eji ya emepụta oriọna dị iche iche. N'ezie, PET egosila na ọ bụ otu n'ime ihe kachasị mma na imebe ọkụ, ma ọ bụ na mpụga ma ọ bụ n'ime.
Ihe mgbasa ozi ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, akwụkwọ mmado ma ọ bụ akara maka nkwukọrịta anya. N'otu aka ahụ, a na -ejikarị ya dị ka ihe dị mma maka imepụta ihe ngosi na ụlọ ahịa yana ihe ngosi ma ọ bụ ihe omume dị iche iche.
Nhazi nghọta na mgbanwe: N'ihi njirimara abụọ a, ndị na -azụ ahịa nwere ike ịhụ n'ime ihe ha zụtara na ndị nrụpụta nwere ọtụtụ ohere ngosi.
Igbe PET na -adịgide adịgide
Enwere isi ihe ole na ole mere eji ele nkwakọ ngwaahịa PET anya ka ọ na -adigide gburugburu ebe obibi. Ihe ndị a bụ ihe kpatara ya:
Obere ike na akụrụngwa maka imepụta ya
N'ime ọtụtụ afọ, mmepe nke teknụzụ belatara akụrụngwa achọrọ iji mepụta nkwakọ ngwaahịa PET yana kwa oriri ike na usoro nrụpụta belatara. Tụkwasị na nke a, ebugharị ya pụtara na ọnụ ahịa na mmetụta na gburugburu ebe obibi ga -ebelata n'oge njem, n'ihi na enwere obere ego.
Ọtụtụ ọmụmụ egosikwala na, ma e jiri ya tụnyere ihe ndị ọzọ, nkwakọ ngwaahịa PET na -ebelata akara ukwu carbon site na iwepụta obere mkpofu siri ike yana obere ike nke akụrụngwa mmepụta.
Ntughari ka mma
A na -ekwenyekarị na enwere ike megharịa arịa PET naanị ugboro ole na ole, nke bụ eziokwu bụ na ọ bụ ihe enwere ike megharịa ya ruo mgbe ebighi ebi ma ọ bụrụ na etinyere usoro mmegharị nke ọma, dabere na ebumnuche a ga -eji.
Ugbu a, PET bụ plastik kachasị arụgharị arụ n'ụwaN'ezie, na Spain, a na -eji 44% nke nkwakọ ngwaahịa n'ahịa maka ojiji nke abụọ. Ekwesịrị ịbawanye pasent ruo 55% na 2025 iji gbasoo atụmatụ akụ na ụba okirikiri nke European Commission kwetara.
Na mgbakwunye na -ejigharị ya dị ka ihe oriri, a na -ejikwa PET emegharị emegharị na ụlọ ọrụ akwa, ụgbọ ala na ụlọ nrụpụta ụlọ. Ọ nwekwara nchekwa nke iji arịa PET megharịrị emegharị na nri na ihe ọgesụgesụ. Agencylọ ọrụ na -ahụ maka nchekwa nri na Europe egosila na ọ bụ ihe nchekwa, ejiri ya maka ire ahịa na iji akụrụngwa dabere na PET megharịrị enwetara na mmiri na mmanya dị nro na Spain site na Royal Decree 517/2013 nyere ikike nke ahụ. akpa ikpeazụ ga -enwerịrị opekata mpe 50% PET na -amaghị nwoke.
Yabụ, anyị nwere ike kwubie na arịa PET dị mma ma na -adigide maka gburugburu ebe obibi, ọ bụghị naanị n'ihi nnukwu ohere ha nwere ike imegharị, kamakwa n'ihi ike ike ha na usoro nrụpụta. Enwere m olileanya na site na ozi a, ị nwere ike ịmụtakwu ihe PET bụ na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Gburugburu » Nzughari » Kedu ihe bụ PET